ရွှေကျင်သာသနာပိုင် ဝါဆိုဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေး သြဝါဒ
Be There if You Love Penang
27 March Myanmar Military day from Dr Zarni’s blog
Myanmar Security forces and Terrorists planing to commit genocide
ကိုတင်ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ Vijay Nambiar ပြော
၀ီရသူပြောတဲ့မိန့် ခွန်းကို အမေရိကန် မှုခင်း စိတ်ပညာရှင်တဦး၏ လေ့လာ သုံးသပ်ချက်
Ethnic Minorities Demand Federal Union
Posted: 27 Mar 2013 07:20 AM PDT
(၂၀၁၃ မတ်လ ၂၆ရက် DVB မှ အသံလွှင့် မိန့်ကြားချက်)
ဆရာကြီးဦးရာဇတ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ငဲ့ပါ။
"သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ဝါဒ အတူတူ"
သဘောထားချင်း တူတာတွေ ပြောပြမယ်။
၁။ ငါတို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားတယ်။
၂။ ငါတို့ဟာ မြန်မာထမင်း အာဟာရ စားသုံးတယ်။
၃။ ငါတို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ကျောင်းနေတယ်။
၄။ ငါတို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ ပညာသင်တယ်။
၅။ ငါတို့ဟာ မြန်မာပြည် လွတ်လပ်ရေး ရဖို့က တို့တာဝန်ဆိုပြီး
ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်က မိတ္ထီလာမှာ မွေးတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက နတ်မောက်မှာ မွေးတယ်။
မင်းကဘယ်ဘာသာ – ငါဘယ်ဘာသာဆိုပြီး နှီးနှောပြောဆိုတာ မရှိဘူး။
မြန်မာပြည်ချမ်းသာဖို့၊ လွတ်လပ်ရေးရဖို့ သူတို့ လုပ်ခဲ့ကြတယ်။
သူတို့ နှစ်ယောက်မှာ ဦးရာဇတ်က မွတ်စလင်မ် ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဗုဒ္ဓဘာသာ
ဘာသာနဲ့ ပတ်သက်ပြိး ပြောရိုးထုံးစံမရှိဘူး။
ခုလည်း လွတ်လပ်ရေး ရကြပြီ။
ဒီအတိုင်းသာ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မခန့်လေးစားဖြစ်ပြီးတော့ သတ်ဖြတ် ပုတ်ခတ်နေကြရင် လွတ်လပ်ရေးက ပြန်ဆုံးရှုံးသွားလိမ့်မယ်။
လွတ်လပ်ရေး မဆုံးရှုံးအောင်၊ လွတ်လပ်ရေး တည်တံ့ခိုင်မြဲအောင် နေကြထိုင်ကြပါ။
လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ မွတ်စလင်မ် ဆရာကြီး ဦးရာဇတ်နဲ့
လွတ်လပ်ရေး ဗိသုကာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ငဲ့ပြီး
ရှေ့ရေးအတွက် ၊ တိုင်းပြည်အတွက် စိုးရိမ်ပြီး ပြောတာပါ။
Posted: 27 Mar 2013 06:48 AM PDT
Southeast Asia. Myanmar's Muslim sideshow
Posted: 27 Mar 2013 06:08 AM PDT
အဲလို ခွဲခြားရာကနေ ကြာလာတဲ့အခါ တခုခု အရေးကြုံတဲ့အခါ ဒီလို communities တွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မလုပ်ရုံမက အချင်းချင်း ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ ကိစ္စတိုင်းမှာ လုပ်လာကြလိမ့်မယ်။ ထိပ်တိုက်တွေ့လာ ကြတော့မယ်။
နယ်မြေကွဲတာကမှ နိုင်ငံပြိုကွဲတာ မဟုတ်ပါ။
အချင်းချင်း ထိပ်တိုက်တွေ့နေတာ၊ ကန့်လန့်ကန့်လန့် လုပ်နေပြီး ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေတာ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေ မရှိတာတွေလည်း နိုင်ငံကွဲနေတဲ့ သဘောပဲ။
အဲလိုဆိုရင် ဘယ်လိုမှ ငြိမ်းချမ်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါ။ တခြား ဘာသာဝင်တွေလည်း ထိုနည်းတူပဲ ခွဲခြားခွဲခြား မလုပ်သင့်ပါ။
နယ်မြေကွဲတာကမှ အေးအေးချမ်းချမ်း လမ်းခွဲသွားတာဆိုရင် သူတို့လည်း သူတို့နိုင်ငံမှာ အေးအေးဆေးဆေး၊ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ အေးအေးဆေးဆေး နေလို့ရဦးမယ်။
နယ်မြေအရ ပြိုကွဲတာ မဟုတ်ဘဲ၊ စစ်တပ်ခြင်း တိုက်ရုံလောက်သာ မဟုတ်ဘဲ၊ လူနေမှု ဘဝထဲမှာပါ စိတ်ဝမ်းကွဲ၊ ထိပ်တိုက်တွေ့နေကြမယ် ဆိုရင်တော့ ဘယ်တော့မှ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ နိုင်ငံ၊ လုံခြုံတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ပါ။]
တကယ်တော့ အဲဒါက တဘက်ကို စီးပွါးပျက်အောင် လုပ်ရုံထက် ပိုပါတယ်။
ဘာလို့တုန်းဆိုတော့ ရတနာသုံးပါးဂုဏ်ကို ရိုးရိုးသားသား ဖော်ကျူးတာမျိုး မဟုတ်တော့ဘဲ၊ တဘက်ကို CD တွေ စာတွေနဲ့ ပုတ်ခတ်ဝါဒဖြန့်မှု မပါဘဲ ကိုယ့်ဘာသာတူသူတွေရဲ့ ဆိုင်ကို ပိုပြီး အားပေးစေချင်ရုံ သက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲ တဘက်ကို မုန်းတဲ့ hate speech တွေနဲ့ တွဲပြီးဖြန့်တာ ဖြစ်နေပါတယ်။
ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်ကို ဖော်ကျူးဖို့ သက်သက်ဆို နားလည်ပေးလို့ ရပါသေးတယ်။ အဲဒီ့လုပ်ရပ်က တဘက်ကို စီးပွါးပျက်စေရုံ ဆိုတာမျိုးထက် ပိုပါတယ်။ ဆိုင်တွေမှာ မရောင်းမဝယ်ကြတာက စပြီး အစစ အရာရာ စိတ်ဝမ်းကွဲ၊ အဲဒီစိတ်ဓါတ် ကျယ်ပြန့်သွားပြီး
ကျောင်းဆရာ ဆရာမတွေက အစ ဝံသာနုစိတ်တွေ ဖောင်းပွပြီး ဘာသာမတူတဲ့ တပည့်တွေကို အပြန်အလှန် ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုး၊
ဆရာဝန်တွေက လူနာတွေကို အပြန်အလှန် ခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးတွေ အထိ ဖြစ်လာရင် မခက်ပါလား? …….
ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ဘာသာရေးအရ ကြည့်ရင် ငါစွဲတောင် မထားရဘူးလို့ ဆိုတယ်။ ဘာသာစွဲ၊ လူမျိုးစွဲတွေ၊ အရေပြားအသားအရောင်တွေပေါ် မူတည်ပြီး ခွဲခြားဖို့ဆို ဝေးရောပေါ့။ ခက်တာက သာသနာစောင့်မယ် ဆိုသူ တချို့ကပဲ ကိုယ့်ဘာသာနဲ့ မဆီလျော်တဲ့၊ ပြဒါးတလမ်း သံတလမ်းဖြစ်တဲ့ အတွေးအခေါ်တွေ လျှောက်ရေးနေကြတာက ခက်တယ်။
ဘာသာရေး အရတင် မဟုတ်ပါဘူး။ လူမျိုးရေး အရလည်း ခွဲခြားမှု မပြုသင့်ပါဘူး။ လက်ပန်းတောင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံက ကုမ္ပဏီက ဒီမှာလာပြီး အမြတ်ထုတ်ရုံနဲ့ ဒီက တရုတ်ဆိုင်တွေကို သပိတ်မှောက်ရမယ် ဆိုတာတွေကလည်း …အဲဒီ့ ကုမ္ပဏီနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသား တရုတ်တွေ ဘယ်လိုမှ ဆက်စပ်နေတာ မဟုတ်လို့ ကောင်းတဲ့ တုံ့ပြန်မှု မဟုတ်ပါ။ နိုင်ငံသားအချင်းချင်း ခွဲခြားမှုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted: 27 Mar 2013 06:02 AM PDT
'Pakatan Rakyat tidak mahu berdolak dalik mengenai pembubaran Dun kerana ia mendatangkan kegelisahan kepada rakyat.
"Pembubaran Dun di Negeri Sembilan yang berlaku hari ini secara otomatik tidak di izinkan berlaku di negeri pakatan Rakyat," kata Abdul Khalid dalam sidang media bersama pimpinan tertinggi Pakatan Rayat di sini.
Posted: 27 Mar 2013 04:55 AM PDT
Source: Kaung Kin Ko's status.
ဦးဝီရသူကတော့ ထုံးစံအတိုင်း စကိုင်းနက် ကနေ ထပ်ပြီး မီးမွှေးသွားတာပေါ့ဗျာ။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့သတင်းတွေကတော့ ခုတမျိုး၊ တော်ကြာတမျိုးပေါ့။ အဲဒါတွေသာ လိုက်ဝေဖန်ရရင်တော့ ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်ဘယ်လောက်ရေးရေး သူအယောင်ဆောင်တာကို ဆက်ယုံတဲ့သူကလည်း ယုံမှာပဲလေ။ ….မနေ့က သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောသွားတဲ့ မွတ်စလင်အကုန် အစွန်းရောက်စွာ တသံတည်း ထွက်တယ် ဆိုတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးတော့ ဟိုးအရင်ကတည်းက အမုန်းကမ်ပိန်းတွေ စကတည်းက ကျနော် အများဆုံးတွေ့တာက ပြည့်ဝတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ တော်တော်များများရယ်၊ အလယ်အလတ် အစ္စလာမ်တွေရယ်က ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး အဆိုအမိန့်တွေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ ကို ခဏခဏ share နေ ကြတာဗျ။ အစ္စလာမ်တွေ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆိုအမိန့်တွေကို ရှယ်နေကြတာက အနည်းစု ဖြစ်တော့ ဖြစ်လာရင် ပိုပြီး ဒုက္ခရောက်မှာကို သိလို့လည်း ပါမယ်။ လူလူချင်း ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်မှာစိုးလို့လည်း ပါမယ်။
အဲလိုပဲ ပြည့်ဝတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ ၊ ဘာသာမဲ့တွေလည်း လူအချင်းချင်း တန်ဖိုးထားဖို့ share နေကြတာပဲလေ။ နောက်ပြီး ဦးဝီရသူလို တအား အစွန်းရောက်တဲ့ သူကိုတောင် ဘာသာပေါင်းစုံ ငြိမ်းချမ်းရေး အဖွဲ့က မွတ်စလင်တွေက (ဘာတခုမှ ဝေဖန်ပုံမရ) စကိုင်းနက် ဗွီဒီယိုမှာလည်း ဘာမှ ပြောမသွားဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ ပြဿနာ မဖြစ်ချင်လို့ပဲ ယူဆပေးလိုက်ပါတယ်။ (တကယ်တော့ ဦးဝီရသူကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးသင့် ပြောသင့်တယ်) အဲဒီတော့ မနေ့က သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောသလို "မွတ်စလင်အားလုံး" သွေးထိုးလှုံဆော်တဲ့ နေရာမှာ တသံတည်း ညီတယ် ဆိုတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူးဗျ။ ကျနော့် မိတ်ဆွေ မွတ်စလင်တွေ share ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာထဲက အဆိုအမိန့်တွေ၊ ကျနော့် မိတ်ဆွေ မွတ်စလင်တွေ share ထားတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေ Facebook မှာ ရှိတာကို ပြလိုက်ချင်တယ်။ အဲလိုပဲ ဒီလိုသတင်းတွေ ဖြန့်ချီကြတဲ့ သတင်းထောက် အများစုတွေ၊ စာနာကြတဲ့သူတွေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတွေပဲဗျ။ ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့လည်း မဆိုင်ဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ကတော့ ပိုတောင် မဆိုင်သေးတယ်။ ဗုဒ္ဒရဲ့ အဆိုအမိန့်တွေကြောင့် တချို့သူတွေ နှလုံးသား မကြမ်းတမ်းကြတာပါ။
ဒါကြောင့် အဓိက hate speech တွေ ဖြန့်တဲ့၊ ဆက်ဖြန့်ဆဲ ဖြစ်တဲ့ ဦးဝီရသူကိုပဲ ဆန့်ကျင်ရတာပါ။ သူ့ အပြုအမူတွေကို ယုံကြည်သူတွေ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်တာတော့ ကျနော်လည်း မတတ်နိုင်ဘူး။
Facebook ပေါ်က အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် သူငယ်ချင်းတယောက် ညဘက် အိပ်မပျော်ဘူး ဆိုတော့လည်း စိတ်မကောင်းဘူး။ မှန်ပါတယ်။ အစွန်းရောက် အစ္စလာမ်ကော အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာရော ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကောင်းတဲ့ ဗုဒ္ဒဘာသာတွေ ကောင်းတဲ့ မွတ်စလင်တွေကိုကို စာနာခြင်း၊ ကာကွယ်ခြင်းနဲ့……အစွန်းရောက် ဗုဒ္ဓဘာသာတွေ အစွန်းရောက် မွတ်စလင်တွေ အပါအဝင် အစွန်းရောက်တဲ့ ဘယ်ဘာသာဝင်ကို မဆို ဆန့်ကျင်တာက တပြိုင်တည်း လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကျနော့် မွတ်စလင် သူငယ်ချင်းတွေ ရှယ်ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆိုအမိန့်တွေကို အချိန်ရတဲ့အခါ ရှာပြီး ကွန်မန့်အနေနဲ့ ပြပါမယ်။ ဒီဟာကိုလည်း တရားလွန် အစွန်းရောက်ပြီး ဘယ်အစုဝင်ကိုမှ မမုန်းတီးကြဖို အုတ်တချပ် သဲတပွင့် အနေနဲ့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ အဓိက လက်သည် တရားခံတွေကိုပဲ ဆန့်ကျင်ချင်ပါတယ်။
Posted: 27 Mar 2013 04:28 AM PDT
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့သားကိုချစ်အောင် ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါခင်ဗျာ။
Having lived in Penang for all my life, I am greatly saddened by the problem of traffic congestion in my home state. The situation is worsening and the light at the end of the tunnel is dimming.
To illustrate, it used to take me ten minutes to drive to college but now it takes me at least 30 minutes and another twenty minutes to look foraplace to park.
Recently, the state government announced its6billion RM plan for the integrated system. Many NGOs and individuals have been up in arms over this project for many reasons.
This evening, there will beadialogue on "A Vision For An International Livable City", - A TUNNEL AT LIVABLE GURNEY?" at Hotel 1926, 227 Burmah Road, Penang (TEL 04 2271926).
The speakers for this evening are Dr Lim Mah Hui Phd. MPPP councilor and Professor Dr. Jimmy Lim who is an esteemed architect, former PAM PRESIDENT, winner of the 2012 SIA-GETZ architecture prize for Emergent Architecture in Asia and past winner of the Aga Khan Award for Architecture.
Prof Dr. Jimmy isavery passionate conservationist. I helped him to edit the videos he filmed yesterday and this will be screened tonight. It will showcase evidence of how Penang is changing...for the better or worse? Please come and judge for yourself.
Posted: 27 Mar 2013 03:40 AM PDT
ရေးသားသူ - သာကီ ထက်ကောင်း
ကျွန်တော် မြန်မာသတင်းဆိုဒ်တွေ သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ပါဘူး။ ဖွတာတွေ အရိုးအရွက်ဖုံးတာတွေ မုန့်ကြိုးလိမ် သတင်းဖော်ပြချက်တွေ ကျင့်ဝတ်မညီတဲ့အရေးအသားတွေက သတင်းအမှန်ငတ်မွတ်နေသူတွေအတွက် အလွန်အင်မတန် စိတ်ပျက်သွားစေပါတယ်။ နှလုံးသား နဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို တမင် အရောင်လိုက်ဆိုးနေသလားလို့ ထင်ရတယ်။ နိုင်ငံခြားကိုမှအထင်ကြီးတာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာ သတင်းဆိုဒ်တွေကို မြှားဦးလှည့်ဖြစ်တာ ကြာသွားပါပြီ။ သူတို့ဆီမှာက မီဒီယာကျင့်ဝတ်ကို အလေးထားကြတော့ အချက်အလက်အကြောင်းအရာပိုင်းမှာ (အားလုံးမဟုတ်ပေမယ့် အများစုက) ခိုင်မာမှု ရှိကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း ခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့သတင်းများကို အချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီ တင်ဆက်ပေးတဲ့ဆိုဒ်တွေလည်း လက်တစ်ဆုပ်စာ ရှိနေပါရဲ့။ ဒါပေမယ့် ညစ်ပတ်ရိုင်းစိုင်းလွန်းစွာ ၀င်ပေးနေကြတဲ့ ကွန့်မန့်တွေမြင်ရတာ စိတ်မချမ်းသာစရာကောင်းချက်ကတော့ ကမ်းကုန်ဘဲဗျာ။ လက်ရှိပြင်ပမှာ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေက စိတ်ချမ်းသာစရာ တစ်ကွက်မှ မရှိသေးတာလည်း အားလုံးက သိကြမှာပါ။
ဒီနေ့ ၂၆.၃.၂၀၁၃ အင်္ဂါနေ့၊ The Straits Times ရဲ့ Asia reports မှာ ဖတ်ကြည့်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မြန်မာသတင်းက ဦးစားပေးဖော်ပြချက်မှာပါနေတယ်။ 18,000 displaced' in Myanmar riots ခေါင်းစဉ်နဲ့ပါ။ NLD က လွှတ်တော်အမတ် ဦးဝင်းထိန်ရဲ့ မျက်မြင် ကိုယ်တွေ့ ပြောကြားချက်၊ ဒေသခံတို့ရဲ့ပြောကြားချက်နဲ့တစ်ကွ မိတ္ထီလာပြဿနာ အကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ရခိုင်က ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဘင်္ဂလားကခိုးဝင်လာသူလို့စွပ်စွဲပြီး အစွန်းရောက်ဗုဒ္ဓ၀ါဒီတွေရဲ့ တစ်ဖက်သတ်နှိပ်စက်တဲ့အကြောင်း၊ ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့က မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထူးကိုယ်စားလှယ်က လာရောက်ကြည့်ရှုသုံးသပ်မှုအကြောင်း – ဒီသတင်းတွေက သိရှိထားပြီးသားမို့ သိပ်မထူးလှပါဘူး။ အဲ့ – နောက်ဆက်တွဲ ရေးသားဖော်ပြမှုတွေမှာတော့ ၉၆၉ အကြောင်းပါလာတာတွေ့ရတယ်။
မူဆလင်တွေရဲ့ ၇၈၆ ကိုဆန့်ကျင်ဖို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားသဘောတွေထည့်သွင်းထားတဲ့ ၉၆၉ နံပါတ်ကိုအသုံးပြု၊ သြဇာကြီးမားတဲ့ အင်အားစုများကို ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားပုံရတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အုပ်စု တစ်စုဟာ မကြာသေးခင် လများအတွင်း ပေါ်ထွန်းလာပါတယ်တဲ့။ သဘောထားပြင်းထန်တဲ့ မန္တလေးမြို့က ဦးဝီရသူဟာ မွတ်စ်လင်မ်ဆန့်ကျင်မှု မုန်းတီးရေးတရားတွေကို ဟောပြောနေတုန်းပါဘဲတဲ့။ အင်္ဂလိပ်လို တိုက်ရိုက်ဖတ်ချင်ယင်တော့ ဒီနေရာမှာ ဖတ်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါ International Bussiness Time ကို ၀င်ကြည့်ပြန်တော့ ဒီစာမျက်နှာ မှာ မြန်မာပြည်က အကြမ်းဖက်မှု နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်သူဟာ ဦးဝီရသူလား လို့ခေါင်းစဉ်တပ် သတင်းဆောင်းပါးကို တွေ့ရပြန်ရော။ အဲ့ဒီမှာ ဦးဝီရသူကို ကြံကြံဖန်ဖန် " မြန်မာဘင်လာဒင် " ဆိုတဲ့ tittle တပ်ထားတာ ကျွန်တော့်မှာ ရယ်ရအခက် ငိုရအခက် ဖြစ်သွားတယ်။ ဘင်လာဒင်ကို အကောင်းမြင်တဲ့ မူဆလင်အုပ်စု တစ်ချို့ကတော့ နှိုင်းရကောင်းလားဆိုပြီး ထအော်ဦးမှာ သေချာသဗျို့။ ဓါးတရမ်းရမ်းနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးများက ဂျာနယ်လစ်တွေရဲ့ကင်မရာမင်မိုရီကဒ်တွေကို ခြိမ်းချောက်တောင်းယူတာ၊ Burma Campaign UK's director Mark Farmaner က " ရိုဟင်ဂျာဆန့်ကျင်ရေး ဖြစ်မလာခင်ကတည်းက မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စုဖွဲ့ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေခဲ့ကြတယ် " လို့ IBTimes UK ကို ပြောတာ၊ ဦးဝီရသူဦးဆာင်တဲ့ မြန်မာပြည်တစ်ခွင် မူဆလင်ဆန့်ကျင်ရေးတရားပွဲတွေ လုပ်ပြီးသွားတဲ့ ဒေသတိုင်း ဒီလိုအဓိကရုဏ်းတွေ မီးခိုးကြွက်လျှောက် ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်လာတာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေကလည်း မူဆလင်တွေအပေါ် ရမယ်မျိုးစုံရှာပြီး ဝေဖန်ရှုတ်ချတဲ့ စာရွက်စာတမ်း လက်ကမ်းစာစောင်တွေကို လပေါင်းများစွာ ဒိုင်ခံဖြန့်ချိနေတာ စသဖြင့် လိုတိုရှင်းဖော်ပြထားတာ တွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါက နာမည်ကြီးမီဒီယာ အချို့သာရှိပါသေးတယ်။ အတိုချုပ်ဆိုရယင် ကမ္ဘာ့မီဒီယာမှန်ချပ်ထဲက ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် 969 group/gang တို့၊ Extremist Buddhist Nationalism တို့၊ Neo-NarzI Buddhism တို့၊ Burmese Buddhist monks တို့ စတင် ပလူပျံနေပါပြီ။ နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအပေါ် တစ်ကမ္ဘာလုံးစောင့်ကြည့်နေချိန်ကျမှ နိုင်ငံတကာမီဒီယာနံရံထဲ ဒီသံတစ်ချောင်း ရိုက်သွင်းလိုက်သလိုဖြစ်ကုန်ပါပြီ။ ဒီပုံရိပ်တွေ ဒီအက်ကြောင်းတွေကို ဘယ်လိုပယ်ဖျက်လို့ရနိုင်တော့မလဲ။ The Golden Land လို့ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ မကြာခင် The Bloody Land & Hands အဖြစ် အမည်တွင်တော့မှာလား။ ဘာသာရေး၊ လူမျိုးရေး ဆိုတာတွေကို ဘေးဖယ်ချထားပြီး မြန်မာပြည်သားတစ်ယောက် လူသားတစ်ယောက် အနေနဲ့ကြည့်မြင်ရင်တောင်မှ ရှက်စရာကောင်းလွန်းနေပါပြီ။
ခုတစ်လော နိုင်ငံရပ်ခြားမှာရှိနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အချို့ကို Are you traditional Buddhist or 969 Myanmar Buddhist ? လို့ မေးတဲ့အဆင့်ထိရောက်နေပြီလို့ သိရတယ်။ ပြည်တွင်းနေသူများအဖို့ သိပ်မသိသာသေးပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားက မြန်မာအလုပ်သမားတွေ တဖြည်းဖြည်းခေါင်း မဖော်နိုင်တဲ့ဘ၀ကို ရောက်ဖို့အလွန်နီးစပ်နေပါပြီ။ တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေကို ကြည့်ယင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း/စာသင်ကျောင်းတွေကို မူဆလင်တွေ လိုက်ဖျက်ဆီးတာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့အိုးအိမ်လုပ်ငန်းတွေကို မူဆလင်တွေက အုပ်စုဖွဲ့ ရန်စမီးရှို့လုယက်တာ ဘာတစ်ခုမှ မတွေ့ရသေးပါဘူး။ မူဆလင်တွေက ၇၈၆ ဂိုဏ်းအမည်နဲ့ သောင်းကျန်းတာ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ရမ်းကားသတ်ဖြတ်တာလည်း မကြားဖူးပါဘူး။ မူဆလင်တွေက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုစော်ကားနေတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်ကွက်တွေကိုလည်း မမြင်ဖူးပါဘူး။ အဲ့ဒါနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်တွေကိုဘဲ တွေ့မြင်ကြားသိနေရတယ်။
ဒီနေရာမှာ အလွန်ထူးခြားတဲ့အချက် ၂ ချက် သတိထားမိတယ်။ (အစစ်လား အတုလား မသိတဲ့) သံဃာတော်အချို့နဲ့အတူ အကြမ်းဖက်သမားများဟာ မိမိကိုယ်ကို ၉၆၉ အဖွဲ့သားလို့ တရားဝင်ကြွေးကြော်နေသော်လည်း – (ဦးဝီရသူ အပါအ၀င်) ၉၆၉ ဦးသျှောင်သံဃာတော်များက လက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုများဟာ မိမိတို့နဲ့မပတ်သက်ကြောင်း ငြင်းဆိုမှုလုံးဝမရှိယုံမက မုန်းတီးရေးတရားပွဲတွေ ပိုလို့အရှိန်မြှင့်လာတာက တစ်ချက်။ နောက်တစ်ချက်က ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးတိုင်းက ဒီအယူအဆနဲ့ဂိုဏ်းဂဏကို လိုလားမှုရှိမနေတာက တစ်ချက်။
ပေါ်ထွန်းလာသမျှသော ဘာသာတရားအသစ်၊ ဂိုဏ်းဂဏအသစ်တွေဟာ မိမိတို့ရဲ့ ကျင့်ရပ်၊လမ်းစဉ်တွေ မတူကွဲပြားကြောင်း ချပြနိုင်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ၉၆၉ ကျတော့ ဘုရားရှင်လက်ထက် ဒေ၀ဒတ္တဂိုဏ်းသားတွေလို ရောထွေးရပ်တည်နေတော့ ခက်တယ်။ ကျွန်တော်အဖြေရှာကြည့်မိတယ်။ ဘယ်လိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရမလဲပေါ့။ အဲ့ဒီအဖြေကလည်း ဘုရားရှင်လက်ထက်ကအဖြစ်အပျက်တွေထဲမှာဘဲ ပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်။ မာရ်နတ်ရဲ့ဘက်တော်သား ဒေ၀ဒတ္တဂိုဏ်းသားတွေဟာ သူတို့ရဲ့လုပ်ရပ်၊ အပြုအမူတွေကြောင့်သာ အလဇ္ဖီရဟန်းတုများဖြစ်ကြောင်း ကွဲပြားသွားခဲ့ရတယ်။ ရဟန်းတု ရဟန်းယောင်တွေရဲ့ ဦးဆောင်မှုက ဘယ်လောက်အန္တရာယ်ကြီးတယ်ဆိုတာ ရာဇ၀င်မှာ အထင်အရှားပါ။ ကွဲကွဲပြားပြားဖြစ်အောင် အလျဉ်မီ မရှင်းနိုင်ယင်တော့ သမိုင်းနဲ့ချီပြီး ကောင်းရနံ့သင်းပျံ့ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်က ဗုဒ္ဓသာသနာ့ဂုဏ်ရောင်ကြီး ရေစုန်မျောရတော့မှာလားလို့ ကျွန်တော် ၀မ်းနည်းသွားရပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓသမိုင်းစဉ်တစ်လျှောက်မှာလည်း ဤမျှလောက်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ အယူအဆနဲ့လုပ်ရပ်တွေ မဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဖူးဘူး။ အစွန်းရောက်အကြမ်းဖက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလို့လည်း တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ ခေါင်းစဉ်အတပ်မခံခဲ့ဖူးပါဘူး။ ဘာသာတရားတစ်ခုထဲ – မသိနားမလည်တဲ့လူကြားထဲ နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက်တွေ မုသားမှိုင်းလုံးတွေ အတင်းအဓမ္မအင်အားသုံးသွတ်သွင်းလို့ အကြမ်းဖက် အကောင်အထည်ဖော်နေမှုတွေကို ကျွန်တော်တို့ ကန့်ကွက်တားဆီးရမယ့်အချိန်တန်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မူဆလင်တွေ ခရစ်ယျာန်တွေဖက်ကို အမြဲမပြတ် မျက်စေ့ဒေါက်ထောက်ကြည့်ပြီး အ၀ိဇ္ဖာပွားနေမယ့် အစား မိမိရဲ့အမျိုးဘာသာသာသနာကို နည်းမှန်လမ်းမှန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှသာ ဗုဒ္ဓတရားတော်နဲ့ ညီညွတ်တင့်တယ်မှာမို့လို့ သံဃာ့အကြီးအကဲများ၊ သာသနာ့ဒါယကာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များ အထူးသတိထားရတော့မယ့်ကာလရောက်သွားပြီလို့ ကျွန်တော် မြင်မိပါတယ်။ ဒီပြဿနာကို အမြစ်လှန်ပြီး အမှန်တကယ် ထိထိရောက်ရောက် ဖော်ထုတ်အရေးယူခြင်း ရှိရပါတော့မယ်။ အကြမ်းဖက်မှု/မတရားမှုကို မတားဆီးသူဟာ မတရားမှုကို အသံတိတ် အကာအကွယ်ပေးမြှောက်စားသူ ဖြစ်တယ်လို့ ပညာရှိစကားတွေမှာ ကြားဖူးပါတယ်။ အာဏာရူးမျက်ကန်းတစ်စုရဲ့ပုံဖော်မှုကြောင့် မတော်တဆ နိုင်ငံတော်ရဲ့ဦးတည်လမ်းကြောင်း နောက်ပြန်လှည့်သွားယင်တော့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးကိစ္စအဖြစ် တကယ်ကို အစိပ်စိပ်အမြွာမြွာ ကွဲထွက်ကုန်မယ့်အနေအထားအထိ ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
双溪威新村的旧水管将于近期之内更换，同时双溪威新村村委会和雪州水供公司（Syabas）将于本月27日（周三）晚上8时假村委会礼堂进行一项汇报会，以向向村民汇报更换新水管工程事宜。 众所周知，双溪威新村长期面对水压不足的问题。村内水压偏低的导因是旧有的水管已经陈旧损坏，而且已经超过数十年不曾更换。 根据雪州水供公司的记录，双溪威现有的水管是"石棉洋灰水管"（Asbestos Cement）。这类水管据称对人体健康造成损害，因此已经被淘汰了，所以有必要即刻被替代。 更换水管建议已于2006年提出，但很不幸的是雷声大雨点小。经过本人和村委会的要求与施压，雪州水供公司终于同意进行更换新水管工程。 为了确定此工程得以顺利进行，上述的汇报会是有必要举办，好让当地民众了解更换新水管工程细节。 根据本人向雪州水供公司了解，上述更换水管工程已经于今年2月15日展开，预计年杪的11月
Posted: 27 Mar 2013 03:31 AM PDT
Old water pipes in Sungai Way new village will soon be replaced andabriefing will be held for villagers on 27th March 2013, at 8pm in Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) hall at Kampung Baru Seri Setia (Sungai Way), which is organised by JKKK Seri Setia and will be attended by officers from Syarikat Bekalan Air Selangor (SYABAS) together with representatives from contractors appointed to
Today is Myanmar Military day or Tatmadaw day..This is specially for them as the top police officers and Home Ministers are all fro the Myanmar Military. This is dedicated to Min Aung Hlaing, Than Shwe and Maung Aye who are still controlling the Myanmar Tatmadaw.
"Burmese Military isaneo-Fascist institution when it comes to 'race' and religion…. Its mobilization of religious and ethnic prejudices is an extremely dangerous strategy. Burma has had refugee issues since the 18th century. Racism in Burma is State-mobilized and state-orchestrated."
Watch here (Part5of 6).
Here isatotal of6segments.
Posted: 27 Mar 2013 02:40 AM PDT
ရခိုင်အရေးခင်းတုန်းကလို ယခုလည်း မြန်မာနိုင်ငံ အနှံ့အပြားတွင်း ပြည်သူ့ရဲ နဲ့ အကြမ်းဖက်သမားများ သွယ်ဝိုက်၍သော်၎င်း တိုက်ရိုက်သော်၎င်း ပူပေါင်းပါဝင်ပြီး အကြမ်းဖက်ခြင်းများကို ကျုးလွန်နေကြသောကြောင့် သတိဝီရိယ ရှိနိုင်ရန် သက်သေပုံနှင့်တကွ ပြန်လည်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Credit to: Peace Forall
Now this tactic was continued in Meikhtila and is spreading to almost all the Mainland Bama areas.
UN official voices concern at reports of increased sectarian violence in Myanmar (drkokogyi.wordpress.com)
Posted: 27 Mar 2013 02:23 AM PDT
ကြိုတင်ကြံစည်ခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ Vijay Nambiar ပြော
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အကြမ်းဖက်မှုတွေဟာ အစီအစဉ်ရှိရှိနဲ့ စနစ်တကျ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ကျူးလွန်သွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ Vijay Nambiar က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနချုပ်မှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့တာပါ။
အကြမ်းဖက်ခံရသူတွေအတွက် ဒေါ်လာတစ်သိန်း ထောက်ပံ့မယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန်သံအမတ်ကြီး ဒဲရစ်မစ်ချယ်က ကြေညာလိုက်ပါတယ်၊ အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်တွေအတွက် တိုက်ရိုက်ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Read all here: http://myanmarmuslimsvoice.com/archives/6191
Posted: 27 Mar 2013 01:48 AM PDT
အမေရိကန် မှုခင်း စိတ်ပညာရှင်တဦး၏ လေ့လာ သုံးသပ်ချက်
၀ီရသူပြောတဲ့မိန့် ခွန်းကို ကျနော် အမေရိကန် မှုခင်း စိတ်ပညာရှင်တဦးကို ပြကြည့်တယ်။
သူပြောတာက He is under drug influence လို့ ပြောပါတယ်။ သူဆိုလိုတာက ဒီဘုန်းကြီးဟာ Ecstasy Drug လိုမျိုးသုံးစွဲထားပုံရတယ်လို့ ဆိုတယ်။အက်ဖါတမင်းဓါတ်သတ္တိ ပါတဲ့ ဆေးမျိုးပါ။ ဒီလိုဆေးမျိုးကိုသုံးစွဲထားပုံရတယ်။
Wira Thu hate speech with English subtitle:
ဦးဝီရသူကို အရေးယူစစ်ဆေးလိုက်ရင် ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းကို ဘယ်သူဖန်တီးတာလဲဆိုတာ ပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်။ သူကိုစစ်တဲ့အခါမှာ ဒီဆေးကိုပဲပြန်ကျွေးလိုက်ရင် အစတွေပြန်ထွက်လာပါလိမ့်မယ် လို့အမေရိကန် မှုခင်း စိတ်ပညာရှင်ကအကြံပေးပါတယ်။ ( မှတ်ချက် – ကျွန်တော့်ရဲ့ email မှာ ပို့ထားခြင်းကြောင့် ပါ )
Posted: 27 Mar 2013 01:21 AM PDT
"Tun Daim itu bimbang dengan kekayaan yang diambil secara haram daripada negara. Apa yang saya tidak setuju ialah ekonomi negara itu digunakan untuk memperkayakan keluarga dan kroni.
"Tun Daim sendiri tahu ratusan juta wang Bumiputera miskin diagihkan kepada kroni beliau.
"Saya tahu dan faham rekod yang ada kerana saya menggantikan tempatnya sebagai Menteri Kewangan selepas itu," katanya dalam satu sesi temuramah bersama Radio Free Malaysia (RFM) malam tadi.
"Soal ekonomi negara saya yakin ia dapat ditambah baik seperti yang dilakukan Kerajaan PR di Selangor dan Pulau Pinang yang jauh lebih baik pengurusannya.
"Jadi bagaimana kita katakan pengurusan ekonomi PR itu lemah berbanding Umno-BN sebelum ini?" soalnya.